DNS iyo DHCP oo furan SUSE 13.2 "Harlequin" - Shabakadaha SMB | Laga soo bilaabo Linux
DNS iyo DHCP oo kujira OpenSUSE 13.2 "Harlequin" - Shabakadaha SMB
Ujeedada aasaasiga ah ee maqaalkani waa in la muujiyo sida aan ku gaari karno a DNS iyo serverka DHCP ee ku jira OpenSUSE iyada oo loo marayo qalabkeeda qaabeynta YaST heer sare, iyo dhammaan -ama ku dhowaad- iyada oo loo marayo qaabkeeda garaafka.
Waxaan kuu balanqaadeynaa rakibid dhameystiran adoo adeegsanaya garaafka garaafka, marka laga reebo -Xeer kasta wuxuu leeyahay wax ka reeban, sax?- ee labo konsollo ah si loo hubiyo hawlgalka saxda ah ee labada lamaane Bind9 + ISC-DHCP-server, loo qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo YaST - Haddana Qalab kale oo Dejin ah taas oo ah qalab aad u wanaagsan oo loogu talagalay maareynta softiweerka iyo qaabeynta nidaamka.
Adeegga ugu horeeya - iyo kan ugu muhiimsan shuruudaha shaqsiyadeed- ee ay tahay in lagu hirgeliyo Shabakad SME, waa adeegga DNS - DHCP. Haddii aynaan doonaynin inaan gacanta ku habeynno xuduudaha shabakadda ee mid kasta oo ka mid ah xarumaha shaqada, waa inaannaan ka maarmin adeegga DHCP, sida mar dambe loo sharraxay Waxa kale oo jira adeegga waqtiga ama NTP.
1 DNS: asalka
3.1 Weydiimaha DNS ee ay sameeyaan macaamiisha Windows
4 Xirmooyinka rakibidda OpenSUSE oo leh jawi desktop ah
5 Talo muhiim ah
6 Adeegyada aan joojin karno si aan u keydinno ilaha
7 Soo gaabinta
8 Ku rakibidda tallaabo-tallaabo ah sawirrada
8.1 Taageerada rakibaadda
8.2 Rakibaadda, ku dhawaaqida keydadka iyo cusboonaysiinta nidaamka
8.3 Rakibaadda iyo qaabeynta adeegyada DNS iyo adeegyada DHCP ee OpenSUSE
Bishii Abriil 2013 ayaan ku daabacnay Laga soo bilaabo Linux taxane ah 5 maqaal oo loogu talagalay hirgelinta aasaasiga ah DNS ee Debian:
Aasaasiga Koowaad ee DNS-ka LAN ee Debian 6.0 (I)
Aasaasiga Koowaad ee DNS-ka LAN ee Debian 6.0 (II)
Aasaasiga Koowaad ee DNS-ka LAN ee Debian 6.0 (V)
Isku soo wada duuboo qodobbada kor ku xusan oo qaab HTML ah ayaa xitaa la siiyay si loo soo dejiyo In kasta oo ay ku qornaayeen -dib markaa- Sii deynta "Tuujinta" Debian-ka, qeexitaannada iyo fikradaha ku xusan iyaga ayaa wali si buuxda u ansax ah.
Taasi waa sababta aynaan u sameyn doonin Hordhac rasmi ah arrinta DNS. Akhri qodobbadaas haddii aad wax su'aalo ah qabtid, halkaasoo ay sidoo kale ka helayaan xiriiriyeyaal ku takhasusay suugaanta DNS.
En furanSUSE, faylalka iyo faylalka ugu muhiimsan ee adeeggan la xiriira waa:
faylka / iwm / sysconfig / magacaabay
programas / usr / sbin / magacaabay-jeeg, / usr / sbin / magacaabay-jeeg, / usr / sbin / magacaabay-compilezone, / usr / sbin / joornaal magacaabay
galka / usr / share / doc / baakado / xidhid /
galka / var / lib / magacaabay /
galka / var / lib / magacaabay / dyn /
faylka /etc/init.d/ la magacaabay
isku xirka astaanta / usr / sbin / rcnamed
Ujeedada Protocol-ka Qaabeynta Qaabeynta Marti-gelinta Dynamic - Nidaamka Aqoonsiga Nabadgelyada Aqalka Guud (DHCP), waa in loo qoondeeyo xuduudaha qaabeynta shabakad ahaan-iyada oo loo marayo server-ka DHCP- halkii gacanta lagu habeyn lahaa xarun kasta. Kumbuyuutar lagu rakibay isticmaalka DHCP ma laha kantarool cinwaankiisa IP-ga ah. Kombiyuutarkan macmiilku wuxuu u qaabeysan yahay qaab u oggolaanaya isku xirkiisa shabakad si otomaatig ah, sida ku cad awaamiirta adeegaha.
Adeegga DHCP wuxuu nolosha u fududeynayaa Maamulayaasha Shabakadda. Adiga oo kuhabeeya serverka DHCP, waad qeexi kartaa xuduudaha sida magac domain, albaab, waqti ama waqti server, DNS server, WINS server hadii la isticmaalo, baahinta cinwaanka IP - warbaahin, Cinwaanka IP-ga iyo maaskaro shabakadda kombiyuutarka macmiilka, magaca kumbuyuutarka macmiilka, iyo cabbiro kale oo badan.
Isbeddello kasta, xitaa isbeddellada waaweyn ee xuduudaha la xiriira cinwaanada IP-ga iyo dejimaha shabakadda, waa la fulin karaa bartamaha, haddii aan wax ka beddelno ama beddelno goobaha adeegga DHCP
Caadi ahaan, server-ka DHCP wuxuu hayaa rikoor buuxa oo ah cinwaanada IP-ga ee loo qoondeeyay ama heshiisyada kirada, iyo badiyaa halbeegga muhiimka ah waa cinwaanka MAC ee kaar kasta oo shabakad ama NIC ah - Kaadhka Wajahadda Shabakadda. OpenSUSE, cinwaanada IP ee la kireystay ama heshiisyada ay bixiso DHCP ayaa lagu keydiyay feylka /var/lib/dhcp/db/dhcpd. fasaxyo.
Xidhmada dhcp-doc, kaas oo lagu rakibay galka / usr / share / doc / baakado / dhcp-doc, waxay ku siisaa dukumiinti aad u wanaagsan - Ingiriis ah - oo ku saabsan adeeggan.
Faylka qaabeynta serverka DHCP waa /etc/dhcpd.conf. Faylka kale ee qaabeynta DHCP waa / iwm / sysconfig / dhcpd, waana halka aad ku qeexayso shabakadda isku xidhka - ama shabakadda isku xidhka - adeegaha ayaa ka jawaabi doona.
Oo tan iyo markii aan ku jirno bartamaha systemd, sidoo kale waxaan haysannaa faylka /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service.
Sidii aan u balan qaadnay in aanaan u adeegsan doonin qunsulka, waxaan u dhaafnay inta kale ee weydiimaha kuwa jecel kuwa bash. Diiwaanka Console ma qaniino.
In kasta oo aan ballan qaadnay in aan la adeegsan karin qunsulka dhowr jeer mooyee, waxaan soo jeedinaynaa socodsiiyaan amarrada soo socda -xidid ahaan- ka dib adeegga DNS - adeegga DHCP wuxuu siiyay ugu yaraan hal cinwaan IP firfircoon, kaas oo u maleynaya inay dhammaystireen rakibaadda dhammaystiran ee labada adeegba waxayna ku jiraan xilli lacag la'aan ah jeegag:
systemctl status magacaabay.service
statusctl status dhcpd.service
xaaladda systemctl dhcp-server.service
Ku xanuunsanaya «nooca»Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso -gaar ahaan taariikhaha cinwaanada- faylasha:
/etc/init.d/ la magacaabay
iyo guud ahaan dhamaan faylasha galka /etc/init.d.
Weydiimaha DNS ee ay sameeyaan macaamiisha Windows
Mar labaad, iyo konsol, u orod sidii isticmaale xidid amarka:
Waqti ku qaad daawashada macaamiisha Windows si joogto ah u weydiiso DNS bogagga ka baxsan Enterprise LAN. Tusaalaha lagu soo saaray maqaalkan, ma jiro dib-u-hagaajiye - gudbiye, ujeeddo cad oo muujinaysa muuqaalkan nidaamyada hawlgalka ee Microsoft® Windows.
Xirmooyinka rakibidda OpenSUSE oo leh jawi desktop ah
Anaga ayaa doorbidna inaan isticmaalno udub dhexaad sida ugu macquulsan uguna macquulsan server. Kadib waxaan soo jeedinaynaa nidaamka lagu gaarayo.
Markaan dooranayno rakibo desktop-ka 'LXDE', OpenSUSE wuxuu ku rakibayaa 'desktop-kernel»Loogu talagalay kombiyuutarada.
Haddii hadhow aan rabno inaan isticmaalno yar yarka caadiga ah - kernel-defaultKaliya waa inaan ku rakibnaa iyada oo loo marayo Maareeyaha Xidhmada YaST, dib u bilaabi nidaamka, dooro «Fursadaha horumarsan ee OpenSUSE»Shaashadda guriga, oo dooro kernel-default. Noocyada labada kern waa isku mid.
Ugu dambeyntii, waa inaan ka saarnaa desktop-kernel iyada oo loo marayo isla Maareeyaha Xirmada, tan iyo markii GRUB waxay u aragtaa inay ka casriyeysan tahay tan kernel-default, hadday jirtana waxay markasta u xulan doontaa xulashada koowaad. Tan iyo markii aynaan jeclaan "jahawareer" ka GRUBWaxaan door bidnay inaan ka saarno miraha desktop-ka, si fudud maxaa yeelay mar dambe ma isticmaali doonno.
Nota: Markaan nidaamka ka saarno desktop-kernel, dhammaan noocyada lagu rakibay kernel-ka ayaa si otomaatig ah looga saaraa. Waxaan dib u eegi karnaa adigoo dooranaya "Fursadaha horumarsan ee loo yaqaan 'OpenSUSE' ee shaashadda guriga.
Ha ku mashquulin hal-abuurka hirgelinta adeegga DNS - DHCP oo leh nidaam hawlgal kasta, adiga oo aan marka hore caddayn fikradaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah. Adeegyadu waxay muhiim u yihiin shabakad sida DNS, khaladaadka fikradaha leh waxay si aad ah ugu bixiyaan jawiga wax soo saarka.
Adeegyada aan joojin karno si aan u keydinno ilaha
Iyadoo la adeegsanayo moduleka YaST «Maareeyaha Adeegga», markii rakibaadda oo dhan la dhammeeyo iyo si loo keydiyo ilaha qalabka, waxaan joojin karnaa adeegyo taxane ah oo, kiiskan gaarka ah, aan loo baahnayn. Tusaalooyin:
koobabka: Nidaamka daabacaadda Nidaamka Daabacaadda Guud ee Unix
- lvm2-lvmetad: Maamulaha Volume Maareeyaha metadata daemon, kaliya haddii aynaan isticmaaleynin qiyam macquul ah
ModemManager: Maamulaha Modemka
Waxaan ahay cadow tarjumaadaha, ok?
GRUB: Console amarka GRiyo Uniifaysan Bootloader
NTP: Network Time Phab -raac. Hab maamuuska loo isticmaalo iswaafajinta saacadaha kombiyuutarada kala duwan ee loo maro shabakadaha
LAN: Shabakadda aagga - Ldeegaanka ARea Network
SPF"Qaabdhismeedka Siyaasadda Dirayaasha«. Nidaamka 'Anti SPAM' ee u oggolaanaya server mail inuu xaqiijiyo in isha SMTP ay ku habboon tahay cinwaanka dirista emaylka.
TSIG: Saxeex Macaamiil - Tdhaqasho SIGdabeecadda. Lagu qeexay RFC 2845 "Hubinta Furaha Furaha Furaha ee DNS«
UUID: Aqoonsiga Caalamiga ah ee Gaarka ah - Aqoonsi Caalami ah
Waxaan qabanay wadar ahaan 71 shaashad si aan uga tarjumno Tallaabo Tallaabo sida ugu macquulsan. Mid kasta oo ka mid ah shaashadda rakibidda, OpenSUSE wuxuu ka dhigayaa shaqadeena mid sahlan iyadoo jiritaanka badhanka Caawinta - I caawi-badanaa ku yaal bidix hoose.
Sawirka 01 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 02 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 03 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 04 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 05 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 06 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 07 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 08 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 09 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 10 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 11 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 12 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 13 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 14 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 15 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 16 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 17 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 18 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 19 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 20 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 21 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 22 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 23 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 24 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 25 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 26 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 27 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 28 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 29 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 30 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 31 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 32 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 33 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 34 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 35 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 36 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 37 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 38 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 39 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 40 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 41 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 42 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 43 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 44 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 45 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 46 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 47 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 48 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 49 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 50 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 51 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 52 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 53 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 53-A - DNS iyo DHCP oo kujira openSUSE
Sawirka 54 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 55 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 56 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 57 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 58 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 59 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 60 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 61 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 62 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 63 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 64 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 65 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 66 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 67 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 68 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 69 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 70 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sawirka 71 - DNS iyo DHCP oo ku jira OpenSUSE
Sida rakibo ahaan waxaan u isticmaali karnaa muuqaal DVD ah sida kii aan ku sameyn jirnay boostadan furanSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso, ama nooc aad u horumarsan. Haddii qalabku aanu haysan DVD player, ama haddii ay noogu habboon tahay isticmaalka xusuusta - wadid qalin, waan sameyn karnaa sida lagu muujiyey maqaalka Autostart xasuusta si loogu rakibo Debian, CentOS, ama openSUSE. Ka dib marka nidaamka hawlgalka la rakibo, barnaamijka waa la rakibi karaa oo loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo xusuusta Qoraa SUSE Studio.
Waxaan soo jeedinaynaa ee loogu talagalay server-ka dns.fromlinux.fan qiyaastii 768 megabyte oo RAM ah iyo 20 GiB oo wadid adag ah. Xusuusta ayaa ah sababta oo ah waxaan ku sameyn doonnaa qaab muuqaal ah.
In Sawirka 05Marka laga hadlayo Qaabeynta Shabakadda, ma sheegi doonno wax Server Server ah maxaa yeelay shaqadaas ayaa ah tan la rakibayo. Haddii aad sheegto wax kale oo server ah, waxaa loo tixgelin doonaa inuu yahay dib-u-hagaajiye - gudbiye, oo waxaan dooneynaa inaan ku hirgalino adeegga qaabkan si aan u hubino ku adkeysiga Microsoft® Operating Systems ee raadinta boggaga internetka.
Waxaan u abuureynaa qaabeyn shakhsi ahaaneed oo jajab ah iyadoo loo eegayo dhadhankayaga gaarka ah. Xor ayaad u tahay inaad doorato oo aad hirgeliso midka aad doorbideyso.
15 image: "Fursadaha Fstab" Waxaan dooranay in qoruhu ay kuxiran yihiin si waafaqsan LABEL - LABEL oo ma aha sida ay UUID, taas oo ah ikhtiyaarka caadiga ah. Kadib rakibida nidaamka aqri waxyaabaha kujira feylka / etc / fstab.
Server-ka 'NTP' si loo waafajiyo waqtiga ayaa si hufan u ah 'Host Hypervisor' halkaasoo uu ka socdo server-ka DNS - DHCP
Si la mid ah sidaan u dooranay shaashadda LXDE maxaa yeelay waxay si fiican ugu habboon tahay baahideena, waxaad dooran kartaa mid kasta oo kale oo uu bixiyo rakibayaasha furanSUSE.
Magaca isticmaalaha la doortay «buzz»Waa in la sharfo qaybinta aan jecel nahay. Laakiin waxba. 😉
In Sawirka 22Ogsoonow in aan ka fureyno dekedda SSH Firewall, isla markaana aan awood u siineyno adeegga SSH.
Fadlan qaado waqtigaaga markaad dooraneyso softiweerka lagu rakibo. Maareeyaha Xirmada ee cajiibka ah ayaa mudan in la maro, sida ka muuqata Sawirka 23.
Sawirada 35, 36, 37 iyo 38Markaad ku rakibto nidaamka qalliinka DVD-ga ama taakuleyn kale, waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah in la caddeeyo meelaha wax lagu keydiyo si loo cusbooneysiiyo nidaamkeenna, ha ahaadeen kuwa deegaanka ama kuwa internetka. Xaaladdeenna, waxaan joojineynaa bakhaarrada kala duwan ee OpenSUSE ay ku bixiso server-keeda internetka, waxaanna ku darnaa kuweenna Local. Magac ahaan, waxaan haynaa bakhaarro database, Packman, updates, Oss y Aan Oss, oo ku filan shaqada la soo jeediyey, iyo inaad naga dhigato miis leh dhammaan sharciga. 😉
Sawirada 39 iyo 40: Wuxuu bilaabaa oo dhammeeyaa cusbooneysiinta Maareeyaha Xirmada YaST. Shaashadda ugu horreysa waxaan uga tagaynaa xulashooyinka caadiga ah. Waxaan riixnay batoonka Codso.
Sawirro 41, 42 iyo 43: Kadib markii Maamulaha Xidhmada uu iskiis u cusbooneysiiyo, wuxuu bilaabayaa shaashadda xirmooyinka ka imanaya nidaamka intiisa kale si loo cusbooneysiiyo. Dhexdeeda, waxaan sidoo kale aqbalnaa xulashada caadiga ah.
44 image: Shaashadda caadiga ah si loo dhammeeyo kalfadhiga LXDE.
Rakibaadda iyo qaabeynta adeegyada DNS iyo adeegyada DHCP ee OpenSUSE
47 image: Ha iloobin in aan abuurno furaha sirta ah ee loogu talagalay casriyeynta firfircoon ee aagagga DNS, kuwaas oo ah fromlinux.fan y 10.168.192.in-adr.arpa.
49 image: Aynu si fiican u eegno sanduuqa ka muuqda korka «Dejinta aagga fromlinux.fan«. Waxaan u oggolaaneynaa cusbooneysiinta firfircoon iyo wareejinta aagga ee shabakadda maxalliga ah wax kale.
53 image: Haddii aan soo bandhigno liiska «tipo:»Diiwaanka DNS, waxaan ogaan doonnaa inaan soo bandhigi karno waxyaabaha soo socda:
A: Tarjumaadda magaca domain IPv4
AAAA : Tarjumaadda magaca domain IPv6
CNAME: loo yaqaan magaca domainka
NS: magaca server
MX: gudbinta boostada
SRV: Diiwaanka adeegyada SRV, oo si ballaadhan loogu isticmaalo Diiwaanka Firfircoon iyo adeegyada kale
TXT: Diiwaangelinta qoraalka
SPF: Qaabdhismeedka Siyaasadda Diraha
54 image: openSUSE wuxuu nolosheena ka dhigayaa mid sahlan iyadoo aanan u baahnayn inaan ku dhawaaqno diiwaanada dib u celinta DNS. Waxaan sidoo kale u oggolaaneynaa cusbooneysiinta aagagga isbeddelka iyo wareejinta aagga ee shabakadda maxalliga ah.
55 image: Kadib markaad dhameyso qaabeynta DNS, wax kafiican inaad hubiso shaqadeeda iyo qaabeynta saxda ah, adoo adeegsanaya dhowr amarro konsol fudud ah.
56 image: Kahor intaadan habeynin DHCP, waa inaan u xilsaarnaa isku xirnaanta shabakadda ee aan u dooran doonno adeeggaas - waxay noqon kartaa mid ama in ka badan oo is-dhexgal ah - Aag ka mid ah Firewall. Waxaan doorannaa Aagga Gudaha oo ah kan LAN-keena.
Sawirada 61 iyo 62: Si loo caddeeyo DNS-ka firfircoon waa inaan tagnaa «Khibrad Qaabeynta Server DHCP«.
63 image: Waxaan doorannaa subnet-ka oo waxaan gujinnaa badhanka «Heer sare«, Oo dooro ikhtiyaarka«Maamulka muhiimka ah ee TSIG«.
64 image: Waxaan doorannaa furaha TSIG ee la soo saaray intii lagu jiray qaabeynta DNS. Haddii aadan markaa sameynin, waad sameyn kartaa hadda oo dib u habeyn cusboonaysiinta firfircoon ee aagagga DNS sida ku cad furaha halkan lagu soo saaray.
65 image: Waxaan ku laabaneynaa subnet-ka la soo xulay hadana waxaan riixey badhanka «Isbedel«.
66 image: Waxaan xushay Rangeena xiisahayaga oo guji «DNS firfircoon«.
68 image: Waxaan bilownay kooxda emepeuse-desktop.fromlinux.fan taas oo ah ujeedka maqaalkeena soo socda, midka aan ku rakibno oo aan ku dhejino dns.fromlinux.fan socda, waxaanan ku xaqiijineynaa dhowr amar oo konsol ah oo fudud oo ah in DHCP si sax ah loo cusbooneysiiyey DNS, iyo in diiwaanka hore iyo gadaal ee DNS ee macmiilkaas la soo celiyo.
Nagala soo qaybgal hal-abuurka soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » DNS iyo DHCP oo kujira OpenSUSE 13.2 "Harlequin" - Shabakadaha SMB
Aad baad ugu mahadsantahay tabarucaada, waxaan bilaabay inaan warqada ku sameeyo, badiyaa way shaqeeyeen
Ku jawaab Rulf
Waa lagusoo dhaweynayaa Rulf. Shaqada ugu weyni waa in la caawiyo kuwa aan aad u jeclayn Console ama Terminal-ka, iyo kuwa imminka adduunkeenna ka yimid ee Windows-ama waxay ka fekerayaan qaadashada boodboodka- oo ay u arkaan in ay jiraan waxyaabo kala duwan oo bixiya suurtagalnimada in la qaabeeyo adeegyada adag. adoo adeegsanaya shaxan garaaf ah.
Edward Claus dijo
Maqaal aad u wanaagsan !!!
Waan kugu raacsanahay inay bilow u noqon karto dadka doonaya inay ka haajiraan Windows.
Jawaab Eduardo Noel
Aynu caddeynno in adeegyadan la'aantood aysan jirin shabakad u qalanta, markii aan ka hadlayno DNS iyo DHCP, waxaan ka hadlaynaa taageerada dhammaystiran iyo saldhigga guud ee shabakad, macno malahan haddii ay tahay SME iyo haddii kale, waxay u muuqataa been inaan ka cabanayno inaanan macluumaad ka haynin gacanta iyo FICO waxay noo siineysaa si isdifaacid la'aan ah. Wax fikrad ah kama haysanno qiimaha ay ku darsatay adduunyada Linux iyo in ka badan kuwa naga mid ah ee aaminsana oo ku kalsoon software-ka bilaashka ah. Waxay qaadataa shaqo badan in la sameeyo qoraalo sidan oo kale ah, oo aan celcelis ahaan ahayn, waxay aad uga fog yihiin waxa maskaxdeennu qiyaasi karto. Shakhsiyan, waxaan layaabay faallooyin yar iyo booqashooyin yar oo mowduuc ah oo laga yaabo inay naga siiso irridda shirkad kasta ama waxay hubinaysaa inaan ka shaqeyno meel kasta markaan si fiican u baranno.
FICO waxay ku sii socotaa tabarucaadkaaga inbadan oo naga mid ah ayaa raaci doonta raadadkaaga. Mahadsanid !!!
Aad baad ugu mahadsan tihiin DHAMMAANtiin sida wanaagsan ee aad ufiican tihiin, saxna u tihiin, uguna habboonyihiin xilligiina. Waa run runtii inay tahay adeegga ugu weyn ee shabakad kasta, oo ay ku jiraan internetka laftiisa.
Shaqo weyn oo daal badan Federico, tallaabo kale oo tallaabo ah oo aan u raaco, shaki la'aanna wax walba waxay ku dhammaanayaan sidaad u leedahay, darajada faahfaahinta maqaalladaadu waxay kaa dhigeysaa inaad aragto khibrada aad ku leedahay aagga. Aad baad ugu mahadsantahay ka qayb qaadashada wanaagsan.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka, Lagarto !!!. Sug midda xigta CentOS 7 oo leh adeegyo isku mid ah, laakiin markan, si aad u qalbi qabowjiso. Waa wax aad u daal badan in la sameeyo qoraal noocan oo kale ah oo wata sawirro, inkasta oo aan rajaynayo in dadka ku cusub adduunka ee Windows ay jeclaadeen. 😉
Waad salaaman tahay Federico, waa maxay qodob weyn, shaqo badan, faa'iido leh oo aad muhiim u ah oo ku saabsan adeegyada DNS iyo DHCP ee aad hadda daabacday. Dhammaantood si heer sare ah ayaa loo sharraxay oo si faahfaahsan baaxad leh iyada oo loo marayo sawirro badan.
Wanaagsan sida loo qaabeeyo server-ka DHCP si loogu oggolaado cusbooneysiinta firfircoon ee diiwaannada DNS ee labada aag ee horay iyo gadaalba, iyadoo la adeegsanayo isla furaha TSIG ee lagu sameeyay qaabeynta serverka DNS.
Iyo inaan ku wada daro dhammaan qaybinta loogu talagalay server-yada "garaafka" sida OpenSUSE (oo aanan waligey la shaqeyn oo hadda qoraalkan ayaa igu dhiirrigelinaya inaan barto) taas oo faa'iido weyn u leh Windows sysadmis oo go'aansada inuu sameeyo "habsami-u-socod" u guurista Linux .
Waxba ma ahan in maqaalada sidan oo kale ah ay mudan yihiin in la raaco inta ka hartay qoraalada aad qorsheyneyso inaad sii wado daabacaadda ku saabsan taxanaha "SMEs".
Waad salaaman tahay Wong !!!. Waxaad horeyba u heshay qoraalkan. Waxaan arkaa inaad la yaabtay qaar ka mid ah xarumaha garaafka YaST. Taasi waa sax saaxiib. Waxaa loogu talagalay qaab ah in kuwa ka yimaada Windows aysan dareemeynin in laga tagay markii hore sababo la xiriira isticmaalka qunsuliyada Linux.
Aragtideyda shaqsiyadeed waa in ay fududahay in la hirgaliyo, la habeeyo lana maamulo lammaanaha 'DNS - DHCP couple' iyada oo loo marayo qunsulka. Laakiin kama joogsanayo aqoonsiga faa'iidooyinka ay leedahay 'disro'.
OpenSUSE, iyo kafaala qaadaha ugu weyn, SUSE, waa ujeedooyin guud oo ujeedooyin guud ah oo la yimaada YaST awood leh si nolosha loogu fududeeyo maamulayaasha adeegga.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad sii wadato aqrinta iyo barashada taxanaha PYMES. Waxaan kugu sugayaa qaybaha soo socda. Farxad !!!.
In kasta oo in muddo ah "la isku haystay" arrimaha ganacsiga, haddana tan disro waxay muujineysaa tayada iyo dadaalka injineeradeeda, anigu uma adeegsan maayo adeege laakiin waxaan u adeegsanayaa desktop ahaan, laakiin waxaan caddeyn karaa xarumaha ay bixiso, qaabka sii deynta hadda : Tumbleweed iyo Leap waa mid aad u wanaagsan, markii ugu horeysay ee loo rogo ... dadka jecel inay is rogaan (: iyo Leap ee isticmaalayaasha aadka u daran, laakiin si loo caddeeyo in Leap uu leeyahay noocyo xirmo oo aan muxaafid ahayn oo aad ugu habboon horumariye / sysadmin doonaya inuu isticmaal tikniyoolajiyadda hadda furan Opensuse waxay si xaqiiqo ah u keenaysaa wax soo saar ka sarreeya celcelis ahaan, ikhtiyaar in la tixgeliyo ah.
Waxaan muddo dheer doorbiday OpenSUSE Desktop ee Shabakad Ganacsi. Hadda oo aan ku tijaabiyay adeegyada, sidoo kale way ila habboon tahay. Waan kugu raacsanahay wax walba.